GIMP: Ka Abuur Halbeegga Halbeegga Sawirka | Laga soo bilaabo Linux
GIMP: Abuur Halbeegga garaaca wadnaha ee 'xoq'
Maqaalkani waa loo qaatay (waxna laga beddelay) iyada oo ku saleysan iyada isha asalka ah, baloogga Hyuuga_Neji oo markii dambe lagu soo koobay GUTL.
Waad salaaman tihiin kuwa waqtiga qaata si ay noo aqriyaan, shalay ayaan ka hadalnay la soco bandwidth oo waxaan abuuraynaa (sidii had iyo jeer) muuqaal muuqaal ah oo leh nuxur aan annaga abuuray. Sawirka awgiis qof baa noogu soo dhawaaday emayl wuxuuna na weydiiyay inaan tusno sida loo abuuro waxa noqon kara mitirka garaaca wadnaha, waxay umuuqatay fikrad aad u wanaagsan sidaa darteed maanta waxaan soo bandhigi doonaa sida loo abuuro iyadoo la adeegsanayo softiweer bilaash ah iyo si gaar ah: GIMP.
Fikradda ah in la sameeyo mitirka garaaca wadnaha halkii ay noogu imaan laheyd si aan isugu dayno in aan ka fikirno in aan wax ku cabirreyno dijitaal ahaan, sidaa darteed waxaan asal ahaan ka doorannay qaab oo waxaan "ka abuurnay" mitirkii la moodayay. Talaabooyinka aad ku gaari karto wax sidan oo kale ah ayaa hoos looga tagay
1 Abuuritaanka qaabka aasaasiga ah ee GIMP
2 Abuuritaanka jirka kooxda
3 Abuuritaanka gudaha kooxda
4 Shaashadda kooxdayada
5 Daboolka acrylic ee xirmada
Abuuritaanka qaabka aasaasiga ah ee GIMP
Tallaabada ugu horreysa ka dib furitaanka Barnaamijka Manipulator Sawirka GNU (GIMP) waa in la abuuro sawir cusub.
Markaa aan aadno liiska Diiwaanka » Nuevo ama haddii, sidayada oo kale, aad jeceshahay isku darka furaha, kaliya isticmaal Ctrl + N. Waxaan doorannaa cabirka ay rabaan laakiin si aan u tusno waxaan u adeegsan doonnaa 640 × 400 pixels oo aan weyneyn ama yareyn.
Waxaan dooranaynaa midab aan dooneyno adiga oo gujinaya sanduuqa midabka oo dooranaya midka aan doorbidno ka dibna midabka ka soo jiidaya sanduuqa illaa daaqadda sawirka. Marka tan la sameeyo waxaan abuureynaa lakab cusub oo daahfurnaan ah (la shaqeynta lakabyada waxaa lagula talinayaa in la dedejiyo habka sixitaanka suurtogalka ah iyadoo aan lumin shaqada oo dhan) Si loo abuuro lakab cusub waxaan gujineynaa lakabka gundhigga ah ee uu ku leeyahay calaamadda dheeriga ah ama saxaafadda wareeg + Ctrl + N si aan u helno wax sidan oo kale ah:
Waxaan horeyba u haysannay lakabka cusub ee hufan oo ku shaqeynaya waxaan abuuraynaa qaab aasaasi ah oo noogu adeegi doona inaan soo uruurino mitirka. Waxa ugu dhow qalabkaas oo aan ognahay waa qalabka elektaroonigga ah ee shaashadiisu u wareegsan tahay qaab ahaan sidaa darteed waxaan qaadannaa qalabka xulashada elliptical (E) oo abuuro goobaabin lakabka hufan ee aan ka buuxinno midab kasta si aan u yeelano qaab aasaasi ah oo aan ku shaqeyn karno.
Waxaan dooranay madow maxaa yeelay goor dambe waxaan u adeegsan doonaa hoos ahaan laakiin halkaas ayaan gaari doonnaa, waxaad dooran kartaa midabka aad rabto.
Abuuritaanka jirka kooxda
Waxaan mar kale abuureynaa lakab cusub laakiin markan uma baahnin inaan abuurno goob wareeg ah laakiin waxaan u adeegsan doonnaa qaabka aasaasiga ah tanna waxaan ka abuureynaa waxa noqon lahaa jirka ama cirifka qalabka. Si taas loo sameeyo, waxaan si sax ah u gujineynaa lakabka leh qaabka aasaasiga ah waxaanan ka eegaynaa menu-ka soo-baxa ee ikhtiyaariga ah "Alpha to Selection".
Markaan dooranay qaabka aasaasiga ah waxaan dib ugu laabanaynaa lakabkii cusbaa ee aan abuurnay laakiin kahor intaanan midab buuxin waxaan tagnaa liiska Xulo waxaana isticmaalnaa ikhtiyaarka ah Shrink o Hoos u dhig qiimihiisu yahay 1 pixel. Waxaan dooraneynaa midabka aan rabno lakabka cusub oo buuxi.
Ilaa hadda waxaan haynaa qaabka aasaasiga ah ee midab madow iyo lakab kale oo leh jirka kooxda midab kale (doorbidaya midab kala duwan oo leh asalka). Waxaan ku suganahay lakabka qaabka aasaasiga ah waana u soconaa filter » Baadho » Gaussian blur oo leh qiime 5 pixel oo waxaan horeyba u leenahay saameynta hooska, natiijadu waa inay noqotaa mid ka badan ama ka yar tan:
Abuuritaanka gudaha kooxda
Waa marki la abuurayo gudaha qalabka oo runtii ah kan ugu shaqada badan maxaa yeelay waxaan adeegsan doonaa maaskaro lakab ah, qaabab buuxiya iyo khiyaano indhaha ah si aan u siino aragti mug leh una ekeysiinno daboolka caadiga ah ee looxa.
Si loo abuuro gudaha waxaan abuureynaa lakab cusub oo waxaan ku laabaneynaa isla qalliinka Alfa loo xusho kaliya hadda waxaan isticmaalnaa lakabka geeska kooxda. Waxaan ku laabaneynaa lakabka cusub iyo liiska Xulo » Hoos u dhig Waxaan u adeegsanaa cabir qiyaastii ah 5 pixels ka dibna waxaan raadineynaa midabka aan u isticmaali doonno asalka shaashada kumbuyuutarka.
Waxaan buuxineynaa midabka oo waxaan sii wadaynaa inaanu abuurno waxa noqon lahaa miisaanka qalabka ee "GIMP language" uusan dhaafin shabakad. Waxaan abuureynaa lakab cusub waana sameyn doonnaa Miirayaasha » Soo bandhigid » Qaabka » Rakib Waxaan dooraneynaa midab (doorbidayaa cagaar) oo ka soo horjeedda asalka qalabka oo aan ku dabaqno saameynta.
Waxaan abuureynaa buuxin sida shabakad laakiin taasi waxay dabooleysaa lakabka oo dhan sidaa darteed waa inaan jarnaa si ay kaliya ugu ekaato shaashadda kumbuyuutarka gudihiisa.
Si loo gooyo shabakadda waxaan kula soo noqoneynaa kan Alfa loo xusho iyadoo saldhig ahaan loo isticmaalayo lakabka asalka qalabka (midka aan ku dhigeyno cagaarka) ka dibna waan sameyn doonnaa Xulo » Xulashada roga ama hadaan riixno Ctrl + I marka tan la sameeyo waxaan fureynaa furaha tirtirto iyo voila g shabakadu waxay ku habboon tahay shaashaddayada aan filayno.
Si loo hagaajiyo la qabsashada waxaan ka beddeleynaa qaabka lakabka ee shabakadda Normal a Kalsooni oo waxaan hoos u dhignay mugdiga 40% si aan xoog "xoog" ah uga saarno.
Kooxdayada aan u maleynayno waxaan ku cabbiri doonnaa garaaca wadnaha annaga oo u ekeysiinayna filimada halka ay ku muujinayaan bukaanku booskooda iyadoo loo adeegsanayo xariiq, sidaa darteed waxaan abuuri doonnaa qadka cabbiraadda oo leh saameyntiisa u dhiganta. Si loo abuuro xariiq waxaan isticmaali doonaa aaladda Wadooyinka ka dibna waxaan ka abuureynaa khadkii aan ka abuurnay.
Marka hore waxaan dooranaynaa midabka aan u rabno Waddada. Waxaan dooranaynaa qalabka Jid oo waxaan raad raacnaa qaabka aan dooneyno inaan u siino.
Mar qaabka aan dooneyno inaan u siino Jid ka dib waxaan u sii socon doonnaa inaanu adeegsanno xulashooyinka aaladda si loo abuuro xariiq loo maro dhammaan waddada aan qeexno
Maxay noqon lahayd wax ka badan ama kayar sidan:
Marka dariiqa la maro, waxaan nuqul ka sameysaneynaa lakabka sadarka (oo aan doorbideyno midab ka muuqda shaashaddayada) lakabka hoose ee aan sameyno filter » Baadho » Gaussian blur oo waxaan u dhaqaaqeynaa inaan ka shaqeyno lakabka safka kore.
Si loo siiyo saameyn aan muuqan oo wadnaha ah waxaan abuureynaa maaskaro lakab (midig guji lakabka) Ku dar maaskaro lakabka) oo waxaan doorannaa qiimaha midabka asalka ah (D). Tani waxay dhigaysaa sanduuq cad oo ku xiga lakabkeenna.
Goor dambe ayaan badaleynaa midabada Hore (Caddaan) iyo Taariikhda Hore (Madoow), midig-guji lakabka cusub oo xulo Muuji maaskaro lakabka. Tani waxay naga wada dhigeysaa cidlo laakiin ha ka welwelin. Waxaan dooranaynaa Qalabka Gradient (waa inaan helnaa ikhtiyaarka ah Bilinear Gradient) oo waxaan soo qaadanaynaa xariiq oo waxaan ka dalbaneynaa bartamaha lakabka si toos ah lakabka.
Waxaan calaamadeyneynaa xulashada Muuji maaskaro Lakabka. Haddii aan eegno lakabyada wadahadalka waxaan arki doonaa wax sidan oo kale ah:
Marka sidaas la sameeyo waxaan aragnaa in khadkayaga kore uu dib u soo muuqanayo natiijaduna aad bay u wanaagsan tahay.
U fiirso in hadda cidhifyada xariiqdu ay leeyihiin nooc ka mid ah wejigiisa, sida haddii ay sii yaraaneysay. Tani dabcan way ka sii fiicnaan kartaa.
Daboolka acrylic ee xirmada
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, waxaan abuuri doonaa dhalanteed ah inay leedahay lakab akrilik hufan, kaas oo siinaya fikradda mugga kooxda, sidaa darteed waxaan u baahan doonnaa lakab dhalaalaya si loo ekeysiiyo acrylic iyo sidoo kale hooskeeda gudaha.
Si loo gaaro hooska gudaha waxaan abuureynaa lakab cusub oo aan sameynaa tallaabada Alfa loo xusho Isticmaalka lakabka hoose ee shaashadda ka dib waxaan ku laabaneynaa lakabka cusub oo aan yareyn doonaa (Xullo »Shrink) oo leh qiimaha 1 pixel.
Marka xulashada la jajabiyo, waxaan ka buuxinaynaa madow. Later, isla lakabka midabka madow, waxaan ku sameynaa tallaabada Alfa loo xusho oo waxaan ku laabaneynaa Xulista »Ku yaraada markan qiimahiisu yahay 2 pixels. Waxaad arki doontaa inaan heysano goobaabin madow, waxaan codsaneynaa a filter » Baadho » Gaussian blur qiimaha 5 oo aan ku helno wax sidan oo kale ah:
Waxaa la joogaa waqtigii la abuuri lahaa daboolka akrilik kaas oo aan u abuurnay lakab cusub oo aan ku sameynno isla tallaabadaas Alfa Xulista adoo adeegsanaya lakabka asalka shaashadda asal ahaan.
Waxaan dooranaynaa qalabka Degan ku dhejinta midabka cad midabka madow, iyo xulashooyinka waxaan ku dooranay qaab toosan iyo gradient ka Wajaha Daahfurnaan, ka dib waxaan ka codsaneynaa kor ilaa hoose iyadoo isku dayeysa inaan qaab u yeelano sida ugu macquulsan:
Si aad u siiso muuqaal wanaagsan waxaan dooneynaa inaan yareyno cabirka lakabka dhalaalaya si aan uyar u yeelno oo aan ugu ekaano qaab akrilik ah, kaasoo ku soo gabagabeynaya casharkeenna natiijada oo dhameystiran:
Illaa iyo hadda casharkeenna suubban waxaan rajeyneynaa inaad ku faraxsan tahay oo aad isku daydo inaad sameyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » GIMP: Abuur Halbeegga garaaca wadnaha ee 'xoq'
Maqaal aad u xiiso badan. Marka aan awoodo waan sameyn doonaa. 🙂
PS: Waxaa loo yaqaan 'electrocardiogram'.
Waan ogaa in loogu yeero oscilloscopes.
Electrocardiogram waa codsi oscilloscope ah oo loo adeegsado in lagu sawiro shaqada wadnaha, sidaas darteedna waxay leeyihiin "cardio" inta udhaxeysa.
Laakiin oscilloscopes waxay yeelan karaan kumanaan codsi oo ku saabsan seismology, elektaroniga, codka, iwm.
Hooyaday * o *
Waa maxay casharka wanaagsan, wuxuu i siinayaa fikrad waxyaabo kale oo badan 😀
Mahadsanid Elav !!!
Casharro aad u wanaagsan ...
Jawaab The_ Mastersok
Tuto wanaagsan. Waxay i xasuusinaysaa wax badan oo aan ku sameeyay CorelDraw iyo Illustrator oo leh astaamahaas.
Wanaagsan ... laakiin inkasta oo aanan wax badan ka faalloonin (oo aan waqti badan ku qaato GUTL) sidoo kale waxaan halkan ku leeyahay koonto DesdeLinux. Waxaan arkaa inaad raacday casharrada maxaa yeelay asalka asal ahaan kuma aanan saarin isku xirnaanta qaababka shabakada ama wax la mid ah, laakiin sida aad u socoto waxay umuuqataa wax aad ufiican maxaa yeelay sifiican ayaa loo sharaxay oo sifiican ayaa loo fahmi karaa.
Haa, waa runtaa inaad koonto ku leedahay halkan ^
Qoraalkan, way iiga caddahay inaan sameyn karo la'aanteed phtoshop ..
Weli kama aanan bixin nafteyda Sawiraha ama 'InDesign'.
Mana jirto cid dan ka leh dhibaatadaada the Xaabada iyo eliotime3000 u qaado dabka !!! XD
Tabobar aad u wanaagsan, hubaal GIMP waa qalab aad u fiican.
Su'aal: mowduuckee ayaad u isticmaaleysaa nidaamkaaga Linux, waa wax weyn, waxaan jeclaan lahaa inaan helo fadlan.
Mahadsanid iyo salaan…
Jawaab Emanuel Acuña
KDE oo leh ogsijiin .. taasi waa, ugu yaraan ahaan. Waxa dhacaya ayaa ah in midabada la beddelay oo aan doorto nidaamka la yiraahdo Chrome 😀
Wanaagsan, kaliya su'aal, sida loogu rakibo Ubuntu 14.04 adoo adeegsanaya Fadhiga Flashback, waxaan horeyba ugu rakibay oksijiin-gtk 2 iyo 3 xarunta softiweerka, laakiin ma haysto qurxin daaqad: - / kaliya mawduuca gtk laakiin ma beddeleyso badhamada cinwaanka.
Waa inay ogsijiintu ka timaaddo KDE. Waxaa jira mowduucyo lagu daydo, laakiin waligeed isku mid ma noqon doonaan .. 🙁
Miyaanay fududaan lahayn in sidan lagu sameeyo Inkscape? Waxaad sidoo kale heshay faa iidada inaad awood u leedahay inaad ku cabirto natiijada ugu dambeysa ee aad rabto.
Dhab ahaan, maahan in la yareeyo Gimp laakiin Inkscape waa aaladda saxda ah tan.
Daacad noqo…. noloshayda waxaan ku furay inkscape, marka ma garanayo sida aan uga jawaabo haddii ay fududahay iyo in kale. Waa run in la miisaamo natiijada laakiin wax fikrad ah kama haysto sida ay ugu shaqeyso qaab vector sidaa darteed waan ku sii dheganaanayaa GIMP xD
Waxaan ku sameyn lahaa Inkscape, laakiin boostada runtii maahan tayda. Sidoo kale, waxaan ku bartay GIMP dhowr shey oo aanan aqoon 😀
Markaas waxaan jeclaan lahaa in qof sidan oo kale ku sameeyo inkscape si uu u awoodo inuu isbarbardhigo, taasi waa miisaanka, fiiqnaanta iwm iwm ee abuurka inkscape iyo gimp ... iyo haddii aysan ahayn wax badan oo lagu weydiisto inaad ku dhejiso tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo si loo arko haddii qofku qaadanayo wax xD.
Waa inaan isku dayaa, aad baad u mahadsan tahay, waa wax aad u fiican 😀
FluxBB iyo vBulletin: Laba Madal Madal oo aad u ba'an
Elementary OS: sida looga tago si la mid ah OS X